Samsung Health 6.1.2.025 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.1.2.025 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Samsung ကကနျြးမာရေးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာတက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုပေးစွမ်းသည်။ ဒါဟာအောင်မြင်သောအစားအစာကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဦးတည်သွားစေကူညီဖို့ရန်သင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အလေ့အထမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ် run, တိုးမြှင်သို့မဟုတ်စက်ဘီး, မိုးလုံလေလုံသို့မဟုတ်ပြင်ပအားကစား play ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်အမျိုးမျိုးသော built-in ခြေရာခံသုံးပြီးတစ်ခုတည်းခြေလှမ်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ add နှင့်ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
Samsung ကကနျြးမာရေးသင့်ရဲ့အစားအစာ, ဖိန်းဓာတ်နှင့်ရေစားသုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတူသောသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးမျှတသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပုံစံကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်။
ထိုကဲ့သို့သော built-in sensor များနှင့်တတိယပါတီ devices တွေကိုသုံးပြီးနှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအား, သွေးဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်, စိတ်ဖိစီးမှု, အလေးချိန် & SpO₂အဖြစ်ကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှတ်တမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲ။
, သင့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရည်မှန်းချက် Set အစားအစာ, ဒါမှမဟုတ်အိပျပျြောကြောင့်နှင့်အတူလိုက်!
သင်အလွယ်တကူသင်တိုင်းတာနှင့် Samsung ကနျြးမာရေး၏ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မှတ်တမ်းများကြည့်ရှုရန်လိုသောပစ္စည်းများထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများကိုမေးပါ! (သာအချို့နိုင်ငံများအတွက်သာရရှိနိုင်)
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နှင့်သင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့ Samsung ကအကောင့်မှတ်ပုံတင်တခါသင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကြိုက် news feed နှင့်သင်၏ preference ကို၏နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးသတင်းစစ်ဆေးပါ။ ခိုင်ခံ့နှင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကကမ်းလှမ်းအကြံပေးချက်များနှင့်အတူကျန်းမာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထားပါ။ (သာအချို့နိုင်ငံများအတွက်သာရရှိနိုင်)
Samsung ကကနျြးမာရေးနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကိုကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး app များကိုရှာဖွေပါ။ '' Technogym 'နဲ့' MyFitnessPal '' အပါအဝင်အတော်များများကျန်းမာရေး apps များကို Samsung ကနျြးမာရေးနှင့်အတူဆက်နွယ်နေနိုင်ပါသည်။
Samsung ကကနျြးမာရေးကိုလုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဒေတာကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သြဂုတ်လ 2016 အပြီးဖြန့်ချိအားလုံးက Samsung Galaxy မော်ဒယ်, Knox က Samsung ကနျြးမာရေးဝန်ဆောင်မှုမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် enabled ။ Knox က Samsung ကနျြးမာရေးဝန်ဆောင်မှုအမြစ်တွယ်မိုဘိုင်းကနေရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ enabled ကြောင်းသတိပြုပေးပါ။
အဆိုပါ App ကိုနောက်ပိုင်းတွင် Galaxy S3 ကနေစတင်အားလုံးကို Samsung စမတ်ဖုန်းကို support နှင့် Non-Samsung က Android ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာစမတ်ဖုန်းပါဝင်သည်။
တက်ဘလက်များနှင့်အချို့သောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ထောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ တချို့ကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဒေသများ / ဝန်ဆောင်မှုပေး / devices များပေါ်အခြေခံပြီးရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Samsung ကကနျြးမာရေးကို Android OS ကို 5.0 သို့မဟုတ်အထက်လိုအပ်ပါတယ်။
Samsung ကကနျြးမာရေး, အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, နှင့်တရုတ်အပါအဝင် 70 ကျော်ဘာသာစကားများ, ထောက်ခံပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဗားရှင်းကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Samsung ကကနျြးမာရေးကိုသာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်ရောဂါသို့မဟုတ်အခြားအခြေအနေများ၏ရောဂါအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရောဂါပျောက်ကင်းအတွက်အသုံးပြုခြင်း, လျှော့ချရေး, ကုသ, ဒါမှမဟုတ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့မရည်ရွယ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အောက်ပါခွင့်ပြုချက် app ကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်။ optional ကိုခွင့်ပြုချက်အဘို့, ဝန်ဆောင်မှုက default လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖွင်, ဒါပေမယ့်ခွင့်ပြုမထားပေ။
- ခန္ဓာကိုယ်အာရုံခံ: နှလုံးခုန်နှုန်း, အောက်စီဂျင်ရွှဲနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတိုင်းတာရန်အသုံးပြု
- ကင်မရာ: သင်အတူတကွအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု. မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ, သင်က telehealth ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိစဉ်သွေးဂလူးကို့စမီတာ / သွေးပေါင်ချိန်မော်နီတာ, သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုချက်တင်အပေါ်နံပါတ်များကိုအသိအမှတ်မပြု, အစားအစာများကို၏ဓါတ်ပုံများကိုယူ, တစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှကင်မရာကိုသုံးနိုင်သည်။ (သာအချို့နိုင်ငံများအတွက်သာရရှိနိုင်)
- ဆက်သွယ်ရန်: သင်သည်သင်၏ Samsung ကအကောင့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်လျှင်စစျဆေးဖို့အသုံးပြု
- တည်နေရာ: သင့်ရဲ့တည်နေရာဒေတာကိုလေ့ကျင့်ခန်းစဉ်အတွင်းစုဆောင်းနေပါတယ်။ သင်ကကျွမ်းကျင်သူတွေကအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု. ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်များကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ (သာအချို့နိုင်ငံများအတွက်သာရရှိနိုင်)
- မိုက်ကရိုဖုန်း: တစ် telehealth ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိချိန်မှာသင်ကဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုစေနိုင်သည်။ (သာအချို့နိုင်ငံများအတွက်သာရရှိနိုင်)
- ဖုန်းနံပါတ်: app ကို update ကိုနဲ့ app ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသတင်းအချက်အလက်ပေးဘို့စက်ကို-ထူးခြားတဲ့မှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးအသုံးပြုထားတဲ့
- သိုလှောင်မှု: သင်ကသင်၏လေ့ကျင့်ခန်း data တွေကို export လေ့ကျင့်ခန်းဓာတ်ပုံများကယ်တင် / ဝန်အစားအသောက်ဓာတ်ပုံများကယ်တင်နှင့် telehealth ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိစဉ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဓာတ်ပုံများ upload / တင်သွင်းနိုင်သည်။ (သာအချို့နိုင်ငံများအတွက်သာရရှိနိုင်)
latestapk စတိုး 50.81k 20.24M
APK ဗားရွင္း 6.1.2.025
File Size: 75.79MB
Release date: 2018-12-07 12:28:00